नौ हजार २३८ थपिए, उपत्यकामा मात्रै तीन हजार ९२४ सङ्क्रमित थपिए | NepaleKhabar.com
नौ हजार २३८ थपिए, उपत्यकामा मात्रै तीन हजार ९२४ सङ्क्रमित थपिए
काठमाडौं, वैशाख २९ गते । नेपालमा कोरोनाभाइरसका नौ हजार २३८ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा २० हजार ३६२ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा नौ हजार २३८ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा ४२४ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गरिएकोमा ६७ जनामा पोजेटिभ पाइएको बताउनुभयो । पछिल्लो चौबीस घण्टामा थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरसका कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार लाख २२ हजार ३४९ पुगेको छ ।
नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पहिलो पटक एक लाखभन्दा माथि पुगेको छ । प्रवक्ता डा. गौतमले हाल एक लाख एक हजार ६३४ जनामा भाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय रहेको बताउनुभयो । सङ्क्रमितको संख्या दैनिक वृद्धि हुँदै जाँदा र निको हुने सङ्ख्या कम हुँदा निको हुने दर ७४.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।